हिरासतमा रहेका महरालाई एकाएक अस्पताल लगीयो,के छ अवस्था ? – Bannigadhi Today
हिरासतमा रहेका महरालाई एकाएक अस्पताल लगीयो,के छ अवस्था ?
धनराज साउँद २०७६ असोज २३, बिहीबार १८:०३
हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई अस्पताल लगिएको छ । सोमबारदेखि हिरासतमा रहेका उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई नर्भिक अस्पताल पठाइएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । हिरासतमा बिरामी भएपछि महराको उपचारका लागि एक जना चिकित्सक नै खटाइएको थियो । अक्सिजनको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । उच्च रक्तचापका विरामी महराको स्वासप्रश्वासमा पनि समस्या आएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि यौ’न दु’र्व्य’व’हा’रको आरोप लागेका महराको बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बयानसमेत लिइएको थियो । उनलाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट अस्पताल लगिएको हो ।
यस्तै कृष्णबहादुर महारामाथि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा महराका आफन्त र नजिकका नातेदारसँग सोधपुछ गर्न थालिएको प्रहरी श्रोतले जनाएको छ । हिरासतमा रहेका महरासँग लिखित बयान लिनुअघि प्रहरीले उनका आफन्तसँग सोधपुछ सुरु गरेको जनाएको छ । प्रहरीले उनका नातेदार र नजिकका सबै आफन्तसंग कुरा कानी गरिसकेपछि दुइ छोराहरुसंग पनि सोधपुछ गरिने बताएको छ । घटना लगायतका विषयमा सबैसँग छलफल र कुराकानी गरेपछि महरासँग लिखित बयान लिने प्रहरीको तयारी रहेको छ ।
प्रहरीले महरालाई संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि ब’ला’त्का’रको प्रयास गरेको आरोपमा १९ गते प’क्राउ गरेको हो। अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले प’क्राउ गरेपछि त्यसयता महरा सिंह दरबार प्रहरी वृतको हिरासतमा छन्। उनलाई म्याद थापाका लागि २८ गते अदालत खुलेपछि उपस्थित गराउने र त्यसपश्चात प्रहरीले अनुसन्धान गर्नको लागि अदालतसँग म्याद प्राप्त गर्दै मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने छ। प्रहरीले म्याद थप गर्दै अनुसन्धान समाप्त गरेमा मुद्दा दायर गर्ने छ। ब’ला’त्क’रको प्रयास गरेको भन्दै रोशनी शाहीले शुक्रबार निवर्तमान सभामुख महराविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। रोशनीले दर्ता गराएको सोही उजुरीका आधारमा महरालाई प’क्राउ गर्ने अनुमति लिन प्रहरी अदालतमा गएको थियो। उजुरीमा उनले आफूलाई महराले बला’त्कार गर्न प्रयास गरेको र त्यसको प्रतिवाद गर्दा आफूमाथि हिंसा गरेको भन्दै उनले नयाँ बानेश्वर प्रहरी वृत्तमा दिएको उजुरीमा उल्लेख गरेकी थिइन्।
असोज १२ गते आइतबार महरा रक्सीको बोतल बोकेर शाहीको तीनकुनेस्थित डेरामा पुगेका थिए। त्यो रातको घटनाको भोलिपल्ट शाहीले मिडियालाई महराले आफूलाई ब’ला’त्का’र र हातपात गरेको बताएकी थिइन्। आइतबार राति महराले आफूलाई ब’ला’त्का’र गरेको भन्दै मिडियामा आएकी शाहीले भोलिपल्ट भने त्यस्तो केही नभएको बताएकी थिइन्। उनले महरा आफ्नो कोठामै नआएको दाबी गरेकी थिइन्। स्रोतका अनुसार घटना भएको छैटौं दिन बानेश्वर प्रहरी वृत्तमा भएको लामो छलफलपछि उजुरी दर्ता भएको हो। प्रहरीले गरेको प्राविधिक अनुसन्धानमा महरा आइतबार रोशनीको कोठामा देखिएको पुष्टि भएको थियो।